UX Naqshadeynta iyo SEO: Sidee Labadan Waxyaabaha Websaydhku uga wada shaqeyn karaan Faa'iidadaada | Martech Zone
UX Naqshadeynta iyo SEO: Sidee Labadan Waxyaabaha Websaydhku ugu wada shaqeyn karaan Faa'iidadaada
Khamiis, Janaayo 31, 2019 Jimco, Febraayo 1, 2019 John Vuong
Waqti ka dib, rajooyinka laga qabo degellada internetka ayaa is beddelay. Rajooyinkani waxay dejinayaan heerarka sida loo farsameeyo khibrada isticmaale ee degel ay bixiso.
Iyada oo rabitaanka matoorada raadinta ay bixiyaan natiijooyinka ugu habboon uguna qanacsanaanta raadinta, arrimaha qaddarinta qaarkood ayaa la tixgeliyaa. Mid ka mid ah maalmahan ugu muhiimsan waa waayo-aragnimo isticmaale (iyo waxyaabo kala duwan oo goobta ka qayb qaata.). Sidaa darteed, waa la ogaan karaa in UX ay tahay arrin muhiim u ah hagaajinta mashiinka raadinta.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waa inaad markaa hubisaa inaad qaabeeysid UX-gaaga istaraatiijiyad ahaan. Adoo awood u leh inaad bixiso UX oo lagu amaano, waxaad sii kordhineysaa boggaaga SEO.
Waxyaabaha soo socdaa waa habab ku saabsan sida aad u kordhin karto sida naqshadda UX loo isticmaali karo si wax ku ool ah loogu hagaajiyo aaggan dadaalladaada SEO:
Wax ka qabashada Dhismaha Macluumaadka ee Boggaaga
Mid ka mid ah kuwa ugu dhinacyada muhiimka ah ee naqshadeynta UX waa sida macluumaadkaaga loo dhigo. Waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo in bartaadu ay tahay inay lahaato qaab dhismeed macluumaad saaxiibtinimo leh si loo hubiyo in adeegsadayaashaadu awoodi doonaan inay hadafyadooda ku dhammaystiraan bartaada. Ujeeddadu waa in la hubiyo in halkaas aad awoodi doonto inaad bixiso qaab-dhismeedka guud ee fudud oo macquul ah, u oggolaanaya dadka isticmaala inay kordhiyaan isticmaalka boggaaga ujeedkooda.
Desktop-ka Apple iyo Mobile View
Hagaajinta Navigation Website
Qeyb kale oo naqshadeynta UX ah oo la tixgelinayo ayaa ah marin haynta bartaada. In kasta oo ay caqli-gal tahay fikrad fudud in la yeesho qorshe hagitaan oo u saamaxaya dadka isticmaala inay si habsami leh u aadaan aagagga kala duwan ee bartaada, ma aha in dhammaan bogagga ay ku guuleysan karaan taas. Waa inaad ka shaqeysaa inaad la timaadid qorshe hawleed shaqeynaya oo ujeedkiisu yahay inaad bixiso habka ugu fudud ee aad ugu wareegi karto bartaada.
Waxaa ugufiican in qaab dhismeedka nidaamka hagitaankaaga loo qaabeeyo darajo.
Heerka koowaad ee kala sarrayntaadu waa marinkaaga ugu muhiimsan kaas oo ka kooban bogagga guud ee boggaaga. Raadintaada ugu muhiimsan waa inay ku jirtaa waxyaabaha ugu horreeya ee ganacsigaaga laga bixiyo, iyo sidoo kale bogag kale oo muhiim ah oo ay tahay inay boggaagu ku jiro sida bogga nagu saabsan.
Raadintaada heerka labaad waa marinkaaga korantada oo sidoo kale ah bogag muhiim ah oo ka mid ah bartaada, laakiin waxay u badan tahay inaysan muhiim ahayn sida kuwa la saari doono marinka guud. Tan waxaa ku jiri kara nala soo xiriir bogga, iyo bogagga kale ee sare ee boggaaga.
Waxa kale oo aad qaadan kartaa heerar kala-duwan, ama meeris megle ah oo menu-kaaga u horseedi karo menus-hoosaadyo. Tani waa mid aad waxtar u leh oo u oggolaanaysa isticmaaleyaashaada inay si qoto dheer uga qotomaan bartaada tooska ah baararkaaga safarka. Tani sidoo kale waa xulasho marin loogu talagalay ganacsiyada leh alaabooyin badan ama adeegyo loo rogi karo qaybo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, caqabadda middan ayaa ah in la hubiyo in baararkaaga menu ay si sax ah u shaqeyn doonaan maaddaama ay jiraan goobo qaarkood oo baararka miinadu burburayaan xitaa ka hor intaadan gaarin bogga aad rabto.
Mar labaad, fikradda ayaa ah in la hubiyo inaad awood u yeelan doonto inaad adeegsadayaashaada siiso awood ay si deg deg ah oo habsami leh ugu dhex wareegaan bartaada. Caqabada ayaa ah farsamaynta a nidaamka wareejinta isticmaalaha diirada saaraya taas ayaa awood u yeelan lahayd in lagu guuleysto taas.
Ka shaqee hagaajinta Xawaarahaaga Degelka
Aagga xiga ee saameynaya khibrada isticmaalaha waa xawaaraha boggaaga. Waxay muhiim u tahay bartaada inay awood u yeelan karto inay si dhakhso leh u xajiso, ama waxaad halis ugu jirtaa khasaarooyin badan.
Haddii bartaada ay ku guuldareysato inay ku rarto 3 ilbiriqsi gudahood, sicirkaaga soo kabashada ayaa hubaal ka gudbi doona saqafka. Laakiin maahan oo keliya inay boggaaga si dhakhso leh u bixiso, laakiin sidoo kale waa inaad awood u leedahay inaad u oggolaato isticmaaleyaashaada inay si fudud ugu gudbaan bogagga kale.
Si aad ugu guuleysato tan, bartaadu waa inay marka hore hubisaa in bartaada ay ku shaqeyneyso kaabayaal waxqabad sare leh. Adeegyadaada ama adeegga martigelinta ee aad ka faa'iideysatay waa inay awoodaan inay taageeraan bartaada iyo tirada isticmaaleyaasha soo booqan doona, iyagoo hubinaya in si dhakhso leh loo xareeyo dhammaan.
Tallaabo kale ayaa ah in la hubiyo in bartaadu tahay mid fudud, oo ka madax bannaan faylasha warbaahinta culus ee sababi kara culeys bartaada. Waa fikrad fiican inaad haysato faylal warbaahineed oo kala duwan, laakiin kuwani waa in lagu hayaa ugu yaraan, oo keliya markii loo baahdo.
Naqshadeynta UX Waa Inay Noqotaa Ku-Beddel-Saaxiibtinimo
Naqshadeynta qaabdhismeedka qaabdhismeedka farsamada casriga ah ee kobcinta beddelka taraafikada, hagaajinta mashiinka raadinta bogga, falanqaynta bogga iyo horumarka nuxurka. Go'doon ku ah asalka midabka casriga ah
Si loo hubiyo in naqshadda UX ee bartaada ay soo celin doonto, waa inaad ku farsameeysaa adigoo maskaxda ku haya. Tan waxaa ka mid ah adeegsiga wicitaanno ficil oo awood badan, iyo sidoo kale istaraatiijiyooyin kale oo xuddun u noqosho.
Laakiin sidoo kale hubi in xitaa haddii aad dadaal weyn geliso dhiirrigelinta beddelaadda, inaadan ka gudbin guddiga oo aadan u dhawaaqin inaad adigu iibinayso boggaaga oo dhan. Goobtaadu waa inay ahaataa, in ka badan wax kasta, oo ku-wajahan adeegsadaha. Waa wax walba oo ku saabsan ka shaqeynta goobtaada si aad u awoodo inaad bixiso khibrada ugu fiican ee isticmaale. Inta aad taas samaynaysid, waxaad dhexgalin kartaa istaraatiijiyado taageeraya oo horay u riixi kara beddelaad.
Ka Faa'iidaysiga Dhaqdhaqaaqa iyo Waxqabadka
Ugu dambeyntiina, waa inaad sidoo kale diirada saartaa muhiimadda dhaqdhaqaaqa iyo ka jawaab celinta - laba dhinac oo ay keeneen kororka taleefannada casriga ah iyo kordhinta raadinta iyo isticmaalka goobta ee aaladaha gacanta.
Boggaagu sidoo kale waa inuu awood u leeyahay inuu bixiyo isla heerka waayo-aragnimo tayo leh ee adeegsadayaasha moobiilka marka la barbardhigo habab dhaqameedka bogagga internetka. Iyada oo maskaxda lagu hayo, waxaa ugu wanaagsan in la qaabeeyo bartaada si ay u noqoto mid jawaab celisa marka laga helo qalabka mobilada. Marka laga reebo noqoshada walxaha waayo-aragnimada isticmaale, ka jawaab celinta mobilada waa qodob muhiim u ah laftiisa laftiisa, gaar ahaan mashiinnada raadinta waxay hadda fiirinayaan boggaga internetka ee moobiilka.
Waxaa ugufiican in la qaato naqshadeynta websaydhka jawaabta leh, mid u oggolaanaysa bartaada inay iskula qabsato qalab kasta iyadoon loo baahnayn in lala yimaado noocyo badan oo bartaada ah.
Kordhi UX ee hagaajinta SEO
Laga bilaabo khibrada isticmaale mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu hagaajin karo boggaaga 2019 waa arrin darajayn muhiim ah oo aan la dafiri karin, ay sax tahay in laga shaqeeyo hagaajinta. Waxaa jira dhinacyo badan oo ku lug leh, qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ayaa kor lagu taxay. Uguyaraan ka shaqee shantaan goobood, waxaadna ku socon doontaa wadada saxda ah si aad u hubiso in bartaadu ay lahaan doonto fursado fiican oo aad kuheli karto meel wanaagsan natiijooyinka raadinta.
Tags: maxalliga ahSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkaraadinta dabiiciga ahjawaabidnaqshada ux
John Vuong waa mulkiilaha kaliya ee Local SEO Search Inc ,. Hadafka John waa inuu ka caawiyo milkiileyaasha ganacsiyada maxalliga ah inay hagaajiyaan saamayntooda internetka si ay ugu awood sheegtaan warshadooda. Markuu aqoontiisa ganacsi leeyahay iyo fahamka dabiiciga ah ee muuqaalka ganacsiga maxalliga ah, John wuxuu qoraa boggag internet oo ku xeel dheer sida loo habeeyo ololeyaasha SEO iyadoo lagu saleynayo baahida macmiilka.
Sida loo Isticmaalayo Macluumaadka Inteyer ee Iibsadaha ayaa Ka Faa'iideysan Kara Istaraatiijiyadda Suuqgeynta ee 2019